Uchwepheshe we-Semalt: Amathrendi wamanje ku-Eye Tracking Technology
Uma ucabangela ngomlando wokuqala wokulandelela iso kanye nezenzakalo ezibalulekile ezenziwe,likhule libe yimboni eminingi enithinta abaningiamasimu. Ukuze uqhubeke uqonda ukuthi yikuphi ukulandela iso, konke okumele kuqale kube khonakuchazwe.
uJulia Vashneva, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt idijithaliIzinsizakalo, inikeza ukuqondisisa ngezindlela ezintsha zakamuva zobuchwepheshe bokulandelela amehlo ekudwebeni ubuchwepheshe kanye nolwazi olunzulungokubambisana ne i-CoolTool , inkampani yokucwaninga imakethe.
Ukulandela amehlo kungachazwa njengeqoqo lemininingwane ye-ocular - costo hosting sito web. Idatha iqoqwengokusebenzisa amadivaysi angewona ama-intrusive njenge-tracker esilawuliwe kude noma ekhanda. IIdivayisi engeyona intrusive isebenzisa ikhamera kanye nomthombo wokukhanya we-infrared. IUmthombo okhanyayo uqondiswa emehlweni njengoba ikhamera ithrekhi kanye namarekhodi acacileizici (isb., ububanzi bomfundi, ukuvama kobumnyama, ukunyakaza okujikelezayo). Ihlanganisiweidatha ihlanganiswa isofthiwe yokuhlaziywa kweso kanye nemiphumela ehlaziywe.
Isofthiwe yokulandela iso isetshenziswa njengamanje ekukhangiseni nabathengiucwaninga, ucwaningo, ezokudokotela nokuziphatha kwengqondo, kanye nabantuizici zobunjiniyela kanye nokucwaninga kwezemidlalo nokufanisa. Njengabacwaningithola izindlela ezintsha zesicelo sokulandelela iso, insimu ikhula ngokuphawulekayo.Ngisho namasosha asetshenzisile izigqoko zokulandelela amehlo zezindiza zokulwaukuboniswa kwekhanda eliphakeme (ama-HUD) wezinzuzo zamasu.
Uma ukhuluma ngokulandelela iso, kubalulekile ukuqonda okuyisisekelo esineizinhlobo zokunyakaza kwamehlo okuyisisekelo sobuchwepheshe bokulandela amehlo abandakanya:
Amabhasi..Zibhekwa njengokunyakaza okusheshayo kweso elishintsha ngokungazelelweiphuzu lokulungiswa. Kungaba ukunyakaza okuncane ngesikhathi sokufunda noma ukunyakaza okukhululapho bebuka nxazonke egumbini. Ngokuvamile, ziyizinto ezicabangelayo emvelweni, kodwakungenziwa futhi ngokuzithandela. Ukunyakaza kwe-eye saccadic ejwayelekile kakhulu kwenzeka ngesikhathiimibono yokulala yomuntu.
Ukunyakaza okuqhubekayo okubuhlungu. Ihamba kancane kakhulu kunezinye izinhlobo zokuhamba kwamehlo, i-SmoothUkuphishekela Ukunyakaza kuyisenzo sokuzithandela se-fovea (ingxenye encane ye-i-retina lapho i-visual acuity iphezulu kakhulu). Umuntu unayo ngokuzithandelaikhono lokulandelela noma ukungazinaki le-stimuli. Kukhona labo bantu abaqeqeshiwengubani okwazi ukwenza inqubo ehambelanayo yokuphishekela ngaphandle kokuba nesisusa (target target).
Ukuhamba kwe-Vergence. Ngokungafani nezinye izinhlobo zokunyakaza kwamehlo, kuyilapho bobabili amehlo ehambaukuqondisa okufanayo, ukunyakaza kwesibindi kungabonakali. Imigqa yokubona ngayinyeiso lingabona into evulekile noma ibanga. I-pupillaryI-constriction yandisa insimu yokubona futhi ibukisa umfanekiso we-fovea (retina).
Ukuhamba kwe-Vestibulo-ocular. Ukubuyisela ukuhamba kwenhloko, i-vestibulo-ocularukunyakaza kweso kusiza ekuqiniseni izithombe ezibukwayo zangaphandle. I-retinalubuso buyagcwalisa isithombe "sishiya" ngokuthola izinguquko zesikhashana (ikhanda lokunyakaza)ngaleyo ndlela ulungisa ngokunyakaza kwamehlo okulungisa. Ukulungiswa kwenxephezelokunalokho kuphuza, ngenxa yokunyakaza kwentuthuko kanye nokuphendula okuzwakalayo
Ubani osebenzisa ukulandelwa kweso
Nsuku zonke, izinhlelo zokusebenza zokulandelela amehlo ziyasetshenziswaizindlela ezintsha zokudala. Uma umuntu ecabanga ukuthi umuntu usebenzise kangakanani amehlo nsukuzonke, akumangalisilelo lwazi eliqoqa liwusizo cishe kuwo wonke umkhakha. Enye imboni enjalo yocwaningo lwemakethe.Ulwazi oluhlangene nocwaningo lokulandela amehlo luye lwasetshenziselwa ukuklanywa kokupakisha kanye nezikhangiso.
Ezemidlalo ezisebenzayo ziye zasebenzisa ubuchwepheshe bokulandelela amehlo njengengqikithi yokuthuthukisaukusebenza komdlali ngokuhlanganisa i-biomechanical, umzimba kanye nokuziphathaidatha yokunikeza ithuluzi lokulinganisa ukuthuthukiswa ngabanye. Ochwepheshe bezenzo neuroscience baye basebenzisa ubuchwepheshe bokulandelela isoekufundeni kwabo amakhono okufunda, ukuxilonga, ukusebenza kwezimoto, kanye nokuhlolanokucubungulwa kwesithombe. Ngokusetshenziswa kwesikrini esisekelwe ekubukeni kwesiboniso nokunyakaza kwekhandaamadivaysi okulandelela mahhala, abacwaningi bathole izindlela ezintsha zokulinganisa nokuhlola futhiukwehluleka kwemisebenzi yemisebenzi kanye nokusebenzisa izindlela ezithintekayo zokulungisa ukuhluleka komuntu ngamunye.
Indawo entsha yokulandelela iso kuyisisombululo esisekelwe ekubukeni. Abacwaningi bebelokhu bekhulaamathuluzi angagcina ekushintsheni ukuxhumana phakathi komuntu kanye nekhomputha. Iucwaningo lugxile ekusebenziseni amehlo ukulawula isikhombisi sekhompyutha..Esikhundleni seusebenzisa igundane, ukunamathela kwenjabulo noma ukubhala tablet, umsebenzisi uzolawula izenzo zekhompyuthangokuhamba kwamehlo nokukhanya.
Ngokuqondile ukuthi ukulandelela kwamehlo okusebenza kanjani kumuntu ovamile kungachazwaimigomo engekho-elula. Ukulandelwa kwamehlo kusukela ukuqala kwawo kusetshenziselwe ukukalafuthi uhlolisise ukubuka komuntu ngamunye. Kunezindlela eziningana zokulinganisa okunjalo, kepha okuvame kakhulu kuyindlela engeyona inhlawulo.
Ukulandelela I-Eye Tracking Remoteive
Umqondo oyisisekelo wokulandelela amehlo okungaxhunyiwe okuyiyona eyisizinda esiyisisekelo esiyinkimbinkimbi yesikhungo somfundi esikoleniukucabanga (PCCR). Lo mqondo usebenzise umthombo wokukhanya okude ukukhanyisaiso, yiziphi izimbangela zangaphakathi ezibangela ukucabangela futhi kuvumela uhlelo lokuqopha ikhamerathola idatha yesithombe. Isithombe esithathwe kudivayisi yokurekhoda (ikhamera) sibonisaukuboniswa okungafani phakathi kokuboniswa komfundi kanye ne-cornea. Kanye nolwaziithathwa itafula le-angled vector calculation lisetshenziselwa ukwakha i-geometrical ethizeizici ezibukekayo ezakha isisekelo sombono wokubuka.
Kuye isofthiwe yokufaka i-eye esetshenziswayo, ukubalwa kokuqondisa kokubukaivumela izinhlelo ezihlukahlukene zokucubungula izithombe kanye nezithombe ze-3D zesongokuphathelene nephuzu lokubheka. Ngokwemigomo elula, inqubo yerekhodiukuhamba kwamehlo, ukuhlola izimiso eziyisisekelo ze-eye pattern, kugxile kumaphuzuyokubheka imingcele, futhi ukwakha ukuqoqwa kwedatha okuyinto lapho kuhlaziywe inikezaidatha yokuhumusha yomsebenzisi ekugcineni kanye nemiphumela. Imiphumela ingakalanoma yini yakha isikhathi sokuqapha kwesisebenzi, ukulungiswa into ethize. Kuyachaza ngokuqhubekayo, isibonelo senqubo kanje:
Umcwaningi we-eye tracker ufisa ukukhomba izithombe ezithile kwikhompyutha(isb., umkhiqizo odayiswayo). Kukhona izithombe ezifanayo zomkhiqizo ku-aisikrini sekhompyutheni ehlukene ngokuhluka (umbala, usayizi, njll) Umcwaningiufisa ukukhomba ukuthi yimiphi imifanekiso umsebenzisi wekhompuyutha egxile kuyo (yikuphiukuphenduka kuzokwazi ukubona ukuthi iyiphi imidwebo yomkhiqizo ejabulisa kakhulukumsebenzisi). Inqubo yesistimu ye-tracker ihlanganisa uhlelo lokurekhoda,iphrojekitha kanye nochungechunge lwezinhlelo zokusebenza eziyinkimbinkimbi. Ekuqaleni, iprojekti idalaisithombe sokukhanya se-infrared kwamehlo. Okulandelayo, uhlelo lokuqopha ikhamera kuthathaizithombe eziningi ezisezingeni eliphezulu eliphezulu lokuboniswa kweso lomsebenzisi (isb., yikuphiizithombe ezisesikrinini umsebenzisi ugxila kuzo).
I-algorithms yokucubungula izithombe (ikakhulukazi, isofthiwe yokulandelela iso ecacilekuya ekulandeleni isithombe) ukukhomba imininingwane ecacile yeso lomsebenzisi nokubonakalisaamaphethini. Okokugcina, ngokusekelwe ekuhlanganiseni imininingwane yokuqoqa imininingwane yesofthiweubala amehlo 'ukuma nokubuka amaphuzu. Le datha ihunyushwa ngaleso sikhathingokuqondene nokuthi yiziphi izithombe ezisekhompyutheni kwikhompyutha umsebenzisi azigxile kuzoukunaka (ngaleyo ndlela umcwaningi angakwazi ukubona ukuthi yimiphi imikhiqizo edayiswayoiqembu elithile lokugcina lomsebenzisi libheke phambili).
Njengoba insimu yobuchwepheshe bokulandelela iso ikhula ezindaweni ezihlukahlukene, imibuzo ifikamayelana nokusebenza kwayo kanye nokukhathazeka ekutholeni idatha enembile. Kulokhoukukhathazeka kungakhathaliseki ukuthi ukuchofoza kuthinta imiphumela yokulandela iso..Njengokuqhafaza komuntuAmehlo isenzo esingenzi lutho, ngokuvamile asikwazi ukulawulwa. Ngokuqondeneekulandeleni iso, ukukhanya kubonakala kubamba ijwabu leso ne-cornea uma ijwabu lesoivale. Njengoba idatha ye-cornea reflection iyadingeka ekuqoqweni kwedatha yokulandela iso,phakathi nemiphumela yokugcina ehlaziya amaphuzu adatha alahlekile afakwe yinoma isizinda sombhalo noma isakhiwo esizenzakalelayo nge-software yokulandelela iso.Nakuba ukukhishwa kwedatha kungeke kube yi-100% kusondele ngokwanele ukudweba iziphetho zedatha ezinembile.
Kukhona omunye umbuzo ophakamisa ukuthi ukunyakaza kwekhanda kuthinta ukulandela amehloimiphumela? Ukunyakaza kwekhanda phakathi neseshini yokulandelela iso kuyisici esisodwaingakwazi ukususa imiphumela njengoba ingaba nemthelela eqondile ekunembile kokubukaidatha. Ekuxazululeni inkinga yokunyakaza kwekhanda, izinzwa eziningi ze-optical kanyeIdatha yokuqoqa amakhamera isendaweni yangaphakathi ngaphakathi kobubanzi bomsebenzisiumbono ukuze udale uhlobo "lokucubungula idatha ye-stereo" olwandayoububanzi obunambile bombono. Nalapha futhi, kufana nokukhanya, isosoftware yokulandelela izokhipha i-schema ezocatshangelwai-vestibulo-ocular (ikhanda) ukunyakaza futhi ulungise idatha yokugcina yokugcina ngokufanele.Okungeke kulungiswe emiphumeleni yokugcina kungukuthi umsebenzisi we-tracker isouphendulela ikhanda labo ohlangothini, uqalise ukunyakaza kwekhanda okusheshayo noma okusheshayo nomaingaphandle kobubanzi bezinzwa ze-optical namakhamera.
Uma ukhuluma ngombuzo we-eye tracker umbuzo owodwa obonakala njalokuphakama ukunemba nokucaca kwemishini yokulandelela iso (opticalizinzwa, amakhamera, njll) kanye nokuhlaziywa kwedatha (software) ukuhlaziywa.Lezi zinkathazo zibhekiswe izinkampani ezahlukene zokulandelela isoabaye bahlakulela izindinganiso zokulinganisa ukuqinisekisa ukucacisa okungcono kakhulukungenzeka. I-standard Monocular Accuracy ihlolisisa ngeso lengqondo iso ngalinyeoda ukuze uqinisekise ukunemba kokusebenza kwamehlo ngabanye. Ngokuphambenekuya kuvivinyo lokuchithwa kwe-Binocular Accuracy okuhlola ngesikhathi esisodwa (kokubilikucatshangwa ukuthi isilinganiso esivamile).
Ikusasa lokulandelela amehlo
Incazelo Isizathu sokunemba Isizathu sokuhlola sisetshenziswa kahlenjengesisekelo sokukala konke okunye okulungile. Ukunemba ngokweqilebheka ubheka ukuhlolwa kwama-angle angabheka ukuthi yiyiphi ingxenye enkuluukulandelela iso. Ukuphazamisa ukucacisa ukukhanyisa kuyisivivinyo esisebenzisa ezineizinkomba zokukhanyisa kubandakanya ukuhlanekezela kwangaphambili nangemuva(ukuphazamiseka). Ukuphazamisa izikhundla zekhanda ukunemba okucatshangelwayoukuhamba kwekhanda phakathi nenqubo yokulandelela iso. Ngamunye walaba bantu ngabanyeizindinganiso zokuhlolwa ngokubambisana nemishini yokulinganisa zenziwaukuze ugcine imiphumela enembile yokulandelela iso.
Kukhona nalabo abahlaziyi abanenkinga yokuthi ukulandela iso kulungileubuchwepheshe obusha. Abagxeki baye bavusa ukwesaba ukuthi ubuchwepheshe buyakwaziukusetshenziselwa kabi futhi / noma imiphumela yokuhlolwa engaqondakali kahle. Njengoba ubuchwephesheuye waba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe futhi imiphumela echazwe kabanzi, iAbagxeki kubonakala sengathi bambalwa futhi bephakathi. Ubuchwepheshe bokulandela iso bebuyeesetshenziselwa ukubona ukulimala kobuchopho kanye nezimpikiswano, emfundweni kulabo abanakhoukukhubazeka kokufunda futhi iningi lensimu engacatshangelwayo.
Ikusasa lobuchwepheshe bokulandela iso lubonakala likhona kakade..Amaselulaubuchwepheshe be-eye tracking technology buqalile kakade. I-Samsung Corporationusungule umugqa wefoni ephathekayo ozoyeka isikhashana ividiyo ebheke phambililapho umsebenzisi ebheka kude. I-Samsung nezinye izinkampani zamaselula zikhonaukwethula amafoni wokuqaphela i-biometric iris okuzovula kuwoumsebenzisi ebheka isikrini somakhalekhukhwini.
Imbonini yezimoto iye yasungula isoukulandelela ukunakekelwa kwezinhlelo zokuqapha ezingakwazi ukubona uma umshayeli elelekanjalo unciphise izingozi. Ngakho, izimoto zesikhathi esizayo zingahle zihlonywe ngesoAmadivayisi wokuqapha iphethini angenza izinguquko ekuqhubeni amaphethini ngokubukaumshayeli kanye nemvelo ezungezile (ukumbozwa kwemvula, isimo seqhwa, njll).Ubuchwepheshe bokulandela amehlo buye kwaziswa ezweni lokudlala okungokoqobo kweqiniso.Ama-VR amasistimu asebenzisa lobu buchwepheshe ukuhambisa izinto ngokuhamba kwamehlo.Ngaphakathi kwenkampani yezokwelapha, ukukhula okuthuthukisiwe ekulandeleni amehlo kuzovumelathola izibonakaliso zokuqala zokushaywa noma ukuhlukunyezwa.
Kunezinselele eziningi ezima endleleni yobuchwepheshe bokulandela amehlonjengoba ihamba emkhakheni wokuphila wansukuzonke. Ukuqaphela ukulandelwa kwesoisofthiwe namanje kufanele ihluke esweni elilulaukunyakaza (ukuphazamiseka ngezinhloso). Ezinye izinto okufanele zibhekiswe kuzofaka ukuhluka kwembono, ukucindezeleka kwamehlo kanye nezimo zokuphazamiseka. Njengesoimishini yokuqapha yokulandelela isebenzisa ukukhanya kwe-infrared beamamehlo, akuzange kube nezifundo ezanele zokuqeda imiphumela emonakalo yokuchayeka okude noma okuphindaphindiwe.
Isibonelo, thina ku-Semalt Digital Services sisebenza eduzei-12Tool inkampani yokucwaninga imakethe, enikeza iso elipheleleubuchwepheshe bokulandelela kanye namanye amasu wokulandelela ukuziphatha kwamakhasimendengokuba ucwaningo oluyinkimbinkimbi. Eqinisweni, le nkampani inayoisizukulwane esihle sokuhola kanye nesidingo esikhulu kakhulu ngenxa yenzalozezilaleli kuya kwezobuchwepheshe. Ngempela, ukulandelwa kweso kukuvumelaukuhlola ukusabela okuqondile kuzici zokumaketha kwakho,okuyinto ehluke ekuhloleni okujwayelekile komthengi. Kubangela aukuthandwa kakhulu kwezobuchwepheshe bokubuka iso emehlweni ensimini yokuthengisafuthi lo mkhuba ukhula.
Ekuphetheni, ubuchwepheshe bokulandelela isoulapha ukuhlala. Ubuchwepheshe buhlanganiswa ekuphileni kwethu kwansuku zonke ngakho ukwamukelwa kwayokubonakala sengathi yande. Ngokushesha lapho izenzakalo nezithuthukisi zenzeka, ukulandela isouzoqhubeka nokuphakamisa ukusebenzisa ubuchwepheshe bokuzenzekelayo kwamadivayisi ajwayelekile futhiukutholakala kweziphambeko zezokwelapha kanye / noma ezingokwengqondo (futhi lokho kungukuqala) TheIkusasa lobuchwepheshe bokulandelela iso alinganiselwe emcabangweni womcwaningi ngamunye,Ukusebenza kwalo okusebenzayo empilweni yethu kungenamkhawulo.